USlim Karim nososayensi baseNingizimu Afrika- baletha ukukhanya ngesikhathi esimnyama | Scrolla Izindaba
USlim Karim nososayensi baseNingizimu Afrika- baletha ukukhanya ngesikhathi esimnyama
Bonke bangamaqhawe namaqhawekazi, bezokwelapha baseNingizimu Afrika.
Inqolobane yolwazi yaseNingizimu Afrika ngezifo ezithathelanayo yakhelwa ukulwa nolunye ubhabhane, lwe-HIV / Aids.
Futhi kwabonakala ngekhwalithi yososayensi nabezokwelapha abakha ikomidi lokweluleka labaphathiswa laseNingizimu Afrika le-Covid.
Usihlalo, uSolwazi uSalim “Slim” Abdool Karim, ubungazwe umhlaba wonke.
ngoZibandlela wathola i-John Maddox Prize yowezi-2020 kanye no-Anthony Fauci, onguchwepheshe wezifo ezithathelanayo eMelika. Umklomelo owenzelwe ukuthuthukisa “isayensi ezwakalayo” emphakathini.
UFauci kwakudingeka abhekane namanga kaMengameli uDonald Trump nezinkolelo zetulo nge-Covid.
UKarim nozakwabo babe nesikhathi esilula sokuphusha “i-sound science” eNingizimu Afrika.
Kepha baphinde bawela izinkemba nabantu abasebenza kanzima kuhulumeni waseNingizimu Afrika ababebonakala bejabulela amandla omvalelo – kanye neminye imithetho engenangqondo eyayihambisana nayo njengokuvinjelwa kokubhema.
Abanye ozakwabo bakaKarim, abanjengoGlenda Grey noFrancois Venter, babenesibindi ikakhulukazi ekutheni babekhuluma ngokungananasi kangakanani ngezingqinamba zomvalelo.